Waa maxay plankton: sifooyinka, noocyada iyo muhiimada | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 26/08/2021 11:06 | Deegaanka
Noolaha nool wuxuu wax cunaa isagoo raaca silsilad raashin oo ku salaysan heerar kala duwan oo noolaha uu yahay kan wax cuna qaar kalena waa kuwa la cuno. Saldhigga isku xirka silsiladda cuntada badda waa plankton. Dad badan ma oga waa maxay plankton mana aha muhiimadiisa. Waa bilawga silsiladda cuntada waxayna ka kooban tahay nooleyaal aad u yar oo awood u leh sawir -qaadidda. Shaqadeeda ugu weyni waa in ay cunto u noqoto nooleyaal badan oo badda ku nool. Sidaa darteed, waxay muhiimad weyn u leedahay horumarinta hab -nololeedka deegaanka iyo nolosha badda.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa waxa plankton yahay, muhiimada uu leeyahay iyo sifooyinkiisa.
1 Waa maxay plankton
2 Noocyada plankton
3 Muhiimadda nolosha
Plankton waa koox makhluuq ah oo dul sabbaysa dhaqdhaqaaqa hirarka badda. Ereyga plankton micnihiisu waa warwareege ama warwareege. Kooxdan makhluuqaadka ahi aad bay u kala duwan yihiin, way kala duwan yihiin waxayna degaan u leeyihiin biyaha macaan iyo biyaha badda labadaba. Meelaha qaarkood, waxay gaari karaan isku -uruurinta illaa balaayiin qof waxayna ku badnaan karaan badaha qabow. Qaar ka mid ah nidaamyada ma guurtada ah, sida harooyinka, balliyada ama weelasha leh biyo deggan, waxaan kaloo ka heli karnaa plankton.
Iyadoo ku xiran cuntadaada iyo nooca foomka, waxaa jira noocyo kala duwan oo plankton ah. Waxaan u kala qaybin doonaa:
Phytoplankton: Waa plankton warshad ah oo waxqabadkeedu aad ugu eg yahay dhirta maxaa yeelay waxay ku helaan tamar iyo maaddo dabiici ah iyaga oo adeegsanaya photosynthesis. Wuxuu ku noolaan karaa lakabka biyaha ee gudbiya iftiinka, yacnii, qaybta badda ama biyaha uu ka helo qorraxda tooska ah. Waxay ku jiri kartaa qoto dheer oo qiyaastii 200 mitir ah, halkaas oo xaddiga iftiinka qorraxdu ka yaraado oo yaraado. Phytoplankton -kan wuxuu ka kooban yahay inta badan cyanobacteria, diatoms, iyo dinoflagellates.
Zooplankton: waa zooplankton oo quudiya phytoplankton iyo noolaha kale ee isku kooxda ah. Waxay inta badan ka kooban tahay qolofleyda, jellyfish, dirxiga kalluunka, iyo noolaha kale ee yaryar. Makhluuqaadkaas waxaa lagu kala sooci karaa hadba waqtiga nolosha. Waxaa jira nooleyaal qaarkood oo qayb ka ah plankton inta ay ku jiraan meertada nolosheeda waxaana lagu magacaabaa holoplanktons. Dhinaca kale, kuwa kaliya ee ka mid ah zooplankton inta lagu jiro wakhti noloshooda ah (badiyaa marka ay tahay marxaladdooda dirxiga) ayaa lagu yaqaan magaca meroplankton.
Bakteeriyada Plankton: Waa nooca plankton -ka ay sameeyeen bulshooyinka bakteeriyadu. Shaqadeeda ugu weyni waa inay burburiso qashinka oo ay kaalin muhiim ah ka qaadato wareegga biogeochemical ee kaarboon, nitrogen, oksijiin, fosfooraska iyo walxo kale. Waxa kale oo lagu quudiyaa silsiladda cuntada.
Fayrasyada Planktonic: waa fayrasyada biyaha. Waxay inta badan ka kooban yihiin fayrasyada bakteeriyada iyo algae eukaryotic ah. Shaqadeeda ugu weyni waa in dib -u -habeyn lagu sameeyo nafaqooyinka ku jira wareegga biogeochemical -ka oo qayb ka ah silsiladda nafaqada.
Inta badan noolaha plankton waa cabbir microscopic ah. Tani waxay ka dhigaysaa mid aan suurtogal ahayn in lagu arko indhaha qaawan. Cabbirka celceliska noolahaasi wuxuu u dhexeeyaa 60 microns iyo millimeter. Noocyada kala duwan ee plankton ee ku jiri kara biyaha waa sida soo socota:
Ultraplankton: Waxay cabbiraan qiyaastii 5 microns. Waxay yihiin jeermisyada ugu yar, oo ay ku jiraan bakteeriyada iyo fallaaraha yaryar. Flagellates waa xayawaanada leh flagella.
Nanoplankton: Waxay cabbiraan inta u dhaxaysa 5 iyo 60 mitir waxayna ka kooban yihiin microalgae unicellular, sida diatomyada yaryar iyo coccolithophores.
Microplankton: Way ka weyn yihiin, waxayna gaarayaan inta u dhaxaysa 60 microns iyo 1 mm. Halkaan waxaan ku aragnaa xoogaa microalgae unicellular ah, dirxiga mollusk -ka iyo kootada.
Qorshaha dhexe: isha bani’aadamku waxay arki kartaa makhluuqda cabbirkaas leh. Wuxuu cabbiraa 1 ilaa 5 mm wuxuuna ka kooban yahay dirxiga kalluunka.
Qorshaha weyn: inta u dhaxaysa 5 mm iyo 10 cm cabirkeeda. Halkan waxaa yimid sargasso, salps iyo jellyfish.
Qorshaha weyn: xayawaan ka weyn 10 cm. Waxaan halkan ku haynaa jellyfish.
Dhammaan noolaha ku jira plankton waxay leeyihiin jirro kala duwan waxayna ka jawaabaan baahiyaha deegaanka ay ku nool yihiin. Mid ka mid ah baahiyadan jir ahaaneed ayaa ah buuqa ama dheecaanka biyaha. Iyaga, bay'ada baddu waa mid mugdi ah waana lagama maarmaan in laga adkaado iska caabbinta si loogu dhaqaaqo biyaha.
Waxaa jira xeelado badan iyo tallaabooyin la -qabsi oo kor loogu qaadayo biyaha sabeeya waxay kordhin karaan fursadda badbaadada. Kordhinta aagga jirka, ku darista dhibcaha baruurta cytoplasm -ka, duqaynta, daadinta iyo dhismayaasha kale ayaa ah xeelado iyo is -waafajin kala duwan si ay awood ugu yeeshaan inay ku noolaadaan deegaannada badda iyo biyaha macaan ee kala duwan. Waxaa jira xayawaanno kale oo leh awood dabaasha oo wanaagsan, taas oo ay ugu mahadcelinayaan flagella iyo lifaaqyada kale ee tareenka, sida ay tahay xaaladda kootada.
Iskudheellitirka biyaha ayaa isbeddelaya heerkulka. Inkasta oo aynaan is tusin indhaha qaawan, haddana microbes -gu way ogaadaan. Biyaha diirran, ku -milanka biyaha ayaa ka hooseeya. Tani waxay saamayn ku yeelanaysaa buuqa qofka. Sababtaas awgeed, diatoms -ku waxay sameeyeen cyclomorphosis, taas oo ah awooda samaynta qaabab jidh oo kala duwan xagaaga iyo jiilaalka si ay ula qabsadaan isbeddelada kudhaca biyaha leh heerkulka.
Dadku had iyo jeer waxay yiraahdaan plankton waa cunsur muhiim u ah deegaan kasta oo badda ah. Ahmiyaddiisu waxay ku jirtaa silsiladda cuntada. Shabakadda cuntada ee u dhaxaysa soo -saarayaasha, macaamiisha iyo kuwa wax guba ayaa lagu aasaasay noolaha. Phytoplankton waxay tamarta qorraxda u beddeli kartaa tamar ay isticmaali karaan macaamiisha iyo kuwa wax guba.
Phytoplankton waxaa cuna zooplankton, oo iyaduna ay wada cunaan hilibleyda iyo omnivores. Kuwani waa ugaarsada noolaha kale oo kuwa guurguura ayaa cuna hilibka. Sidan ayay silsiladda cuntada oo dhami uga samaysantay deegaannada biyaha ah.
Phytoplankton wuxuu nuugaa qadar badan oo kaarboon laba ogsaydh ah iyada oo loo marayo photosynthesis wuxuuna ku biiriyaa ku dhawaad ​​50% ogsajiinta aan ku neefsanno jawiga. Plankton -ka dhintay wuxuu soo saaraa lakab dheecaan ah, mar haddii la fossilized, wuxuu soo saaraa saliiddii la rabay.
Sidaad arki karto, mararka qaarkood waxa ugu muhiimsan baaxad ahaan aad u yar. Xaaladdan, plankton ayaa saldhig u ah cuntada deegaanka badda. Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto waxa plankton yahay, sifooyinkiisa iyo muhiimadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Waa maxay plankton
Waa maxay humus